Mayelana NATHI - Changlin Industrials Co., Ltd.
I-Changlin ihlanganisa indawo yokwakha engaphezu kwamamitha ayisikwele ayi-17000 futhi inemishini eminingi yezobuchwepheshe esezingeni eliphezulu, iqembu labaklami abanolwazi nabasebenzi abangaphezu kuka-150 abanekhono. Sinemigqa emibili yokukhiqiza eyinhloko: umugqa wezikhwama zokuthunga kanye nomugqa wezikhwama zokushisa. Umthamo wethu wezinyanga zonke wezikhwama ungamayunithi ayisigidi, athunyelwa eYurophu, enyakatho Melika, eNingizimu Melika, e-Australia, e-Asia pacific, eMiddle East ……
Ngomoya "wokuzinikela, ukuqamba izinto ezintsha, ukusebenzisana, ukusebenza kanzima" kanye nesitayela somsebenzi sokuba "osebenzayo, osebenzayo, okhulumisanayo, ovelele", bonke abasebenzi banikeza amakhasimende amadala namasha ngemikhiqizo nensizakalo engcono kakhulu. Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kwethu okugcwele eminyakeni engaphezu kwengu-20 kubuchwepheshe bokushisela nokuthunga, sidlulise isitifiketi se-ISO9001, sinombiko wokucwaningwa kwamabhuku we-SA8000, SEDEX, L'Oréal, LVMH, futhi sihlala sikhula ndawonye nemikhiqizo emikhulu kakhulu , Njengezansi: L'OREAL （Kubandakanya kepha kungagcini ku-YSL, HR, LANCOME, VICHY, LA ROCHE-POSAY, Kiehl's)，I-LVMH ing Kubandakanya kepha kungalinganiselwe ku-BVLGARI, eGivenchy, e-GUERLAIN, e-SEPHORA, Yenzuzo） 、 BURBERRY 、 ESTEE LAUDER (Kufaka kodwa kungagcini ku-LA MER, Jo Malone London, CLINIQUE, Bobbi Brown, MAC) 、 SISLEY 、 L'OCCITANE 、 、 UNILEVER 、 P & G, ISDIN, NUXE, LACOSTE, njll.
Ngombono wentuthuko eqhubekayo, manje sekusetshenziswa izinto eziningi ezonga imvelo ezindaweni ezahlukahlukene lapha: Ukotini wemvelo noma welineni kujwayelekile yonke indawo, i-RPET Material isendleleni, ngenkathi i-Recycled EVA noma i-Recycled TPU izobe ukuthambekela okusha. Kusungulwa futhi kusetshenziswe izinto ezintsha zezintambo zezitshalo ezifana nendwangu uphayinaphu kanye nendwangu kabhanana. U-Changlin uzibophezele ekwakheni imikhiqizo yokuvikelwa kwemvelo ethe xaxa, futhi anikele ngamandla ethu ekuvikelweni kwemvelo komhlaba.
Siphe umklamo wakho, sikwenza kube ngokoqobo!
Siyakuqinisekisa ukuthi uChanglin uzoba ngomunye wabalingani bakho abathembekile nabathembekile bokuthenga!
Kuyisifiso sethu ukukunikeza ngemikhiqizo ehamba phambili kanye nensizakalo enhle kakhulu, futhi thina sikwamukela ngemfudumalo i-OEM / ODM.
sidlulise ukuhlolwa kwamabhuku i-L'Oréal, LVMH, SEDEX 4 insika, sinesitifiketi se-ISO9001 ne-SA8000